नेपाल: अक्षयकुमारको ‘किक’ निखिललाई हान्न लगाएपछि दर्शकले किन सिनेमा हेर्ने ?
अक्षयकुमारको ‘किक’ निखिललाई हान्न लगाएपछि दर्शकले किन सिनेमा हेर्ने ?
अभिनेता दयाहाङ राईको ‘डेब्यु’ सिनेमा ‘अनागरिक’बाट निर्देशन थालेका रामबाबु गुरूङले लामो समय समुदायमा आधारित डकुमेन्ट्री निर्देशनमा बिताए । ‘कबड्डी’ उनको पहिलो व्यवसायिक सिनेमा हो । जसको सफलताबाट उत्साहित गुरूङले सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’ बनाए । प्रस्तुत छ, रिलिजको तेस्रो सातामा पनि उत्साहजनक दर्शक पाइरहेको ‘कबड्डी कबड्डी’का निर्देशक गुरूङसँग रातोपाटीले गरेका सिने–संवादः
कसैको ध्यान बजार विकासमा छैन
Labels: Dayahand, Nepali Movie Kabaddi Kabaddi, Saugat Malla